Lixdan Guurada Lixdankii: Ma shantaa laba ah, mise labadaa shanba ah? | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Faalooyinka Lixdan Guurada Lixdankii: Ma shantaa laba ah, mise labadaa shanba ah?
Masaarida ayaa noqon karaysay iyaduna curiye kale oo u ololaynayay midnimada Soomaaliyeed oo ay dan weyn oo ilaa Shalay aawani ugu jirtay oo daarran dhaqaale iyo amnigeeda qowmiga ahba. Barnaamajyadii kicinta ahaa ee Idaacaddii ‘Sowtal Carab’ ee Qaahira ee kontonnadii qarnigii 20aad iyo Idaacaddii af-soomaaliga ku hadlaysay ee danbe ayaa marag ka ah.
Waxa bilaabmay dhismihii hay’adihii dawladeed oo aan si’ tixgelin leh loo qaybsan ee Soomaaliya sed bursatay oo aan wax naf leh laga siin Somaliland. Saluug, tabasho iyo niyad-jab aan ilaa Shalay ka tirmin xiska dadka ayaa ka beermay. Waxa ka beermay wixii dhaliyay dagaalladii sokeeye iyo la soo-noqoshadii madax-bannaanidii Somaliland.
Shalay 60kii waxa laga joogaa 60 sannadood. 60 sannadood ka dib haddana waa la kala maqan yahay. Isku-maqnaansho 30 sannadood qaatay oo lagu ladhay kala-maqnaansho 30 sannadood ah ayaa keenay 60 sannadood oo maqnaansho maqnaanshihii ah.
Waxaa qoray: Boobe Yuusuf Ducaale, waa qoraa buugaag badan oo curin iyo ururinba isugu jirta daabacay. Wuxuu sidoo kale noqday Wasiirka Warfaafinta Somaliland. Qoraalkani waa fikraddiisa, kamana tarjumayso fikradda BBC Somali.
Previous articleCali Maxamed GEEDI oo warbixin cajiib ah ka qoray xaqsiinta gobolka Banaadir
Next articleCoronavirus: Covid-19 death toll hits 500,000 worldwide